Chonga imiyalezo enesimbo kuWhatsApp: inoveli enkulu yenkqubo | I-Androidsis
Ungawucaphula njani umyalezo ovela kumfowunelwa kuWhatsApp
UManuel Ramirez | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Tutorials, Whatsapp
Izolo uguqulelo olutsha lwe I-WhatsApp ekuvumela ukuba ucaphule umyalezo ngokuthinta zonxibelelwano. Ngale ndlela, ungalibala malunga nolo cinezelo lude kwaye uye kumava omsebenzisi omtsha ngesimbo somzimba.
Ngelixa sisalindileyo Umxholo omnyama uza kuWhatsApp, siza kukufundisa indlela yokuphendula ngokukhawuleza imiyalezo kwinkqubo yokuncokola ngokugqwesa. I-WhatsApp eqhubeka nokongeza iindaba ezibalulekileyo, njengoko injalo ilizwi elitsha lememo elizenzekelayo. Ewe kunjalo, sisaswele ingxelo yohlobo lwe wasap yecwecwe.
Le nguqulo intsha ibisele ikwi-beta, ke ndiqinisekile ukuba abanye benu sele benazi. Ungene ngaphakathi ingxelo ezinzileyo ihlaziyiwe izolo, xa sinokusebenzisa isenzo ukucaphula imiyalezo kwincoko nganye okanye kula maqela.
Kude kube ngoku sinako sebenzisa ixesha elide kumyalezo wonxibelelwano osungulwe kwiqela okanye engxoxweni nganye. Into enzima kancinci ngenxa yamanyathelo amabini ekufuneka enziwe ukuqala ukuqamba umyalezo wokuqeshwa.
Ungawucaphula njani ngokukhawuleza umyalezo ngesimbo kuWhatsApp
Kuya kufuneka sibenayo 2.18.327 version ukuze usebenzise olu luhlobo lweWhatsApp ukukhawuleza ucaphule imiyalezo ngesimbo somzimba.
Sikhetha umyalezo womntu kwiqela okanye engxoxweni nganye.
Kufuneka nje umqondiso oya ngasekunene kumyalezo womthumeli.
Ifowuni iza kungcangcazela ukwenza kucace ukuba sicaphula umyalezo.
Ya Siza kuba nomyalezo ocatshuliweyo kwicandelo lokwakhiwa komyalezo.
Ngale ndlela sifuna kuphela isenzo sesenzo sokukhawulezisa ukucaphula kuye nabani na kwiqela. Kungumcimbi wokuyisebenzisa ukuya kusenzela umsebenzi oza kuvumela iincoko zeqela leWhatsApp ukuba zikhawuleze kwaye zingangxoli njengoko ziqhelekile ukuba asisebenzisi ukukhankanywa, okanye lo mqondiso mtsha ukucaphula imiyalezo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungawucaphula njani umyalezo ovela kumfowunelwa kuWhatsApp
Iimaphu zikaGoogle zifuna ukuba ungalahli iinkcukacha zeendawo ozithandayo
Esona siqalisi siBalaseleyo se-Android !!, eyona ndlela iyiyo yokuqalisa iNova